Xarunta tareenada ee Paris Gare du Nord ayaa laga daadgureeyay cabsida bam
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Faransiiska » Xarunta tareenada ee Paris Gare du Nord ayaa laga daadgureeyay cabsida bam
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • News • Dadka • Safarka Tareenka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Xarunta tareenada ee Paris Gare du Nord ayaa laga daadgureeyay cabsida bam.
Saldhigga, oo ka mid ah kuwa ugu weyn Paris, ayaa sidoo kale hela tareenka Eurostar ee London wuxuuna u adeegaa garoonka diyaaradaha ee Charles de Gaulle.
Gare du Nord waxa ku yaal isteeshanka tareenada ayaa laga daadgureeyay shandad aan la ilaalin awgeed.
Boqolaal rakaab ah ayaa ku sugnaa bannaanka saldhigga Arbacadii ka dib markii booliisku uu amray in la daadgureeyo.
Kooxda metro ee Paris ayaa sheegay in gaadiidka la filayo inuu dib u bilowdo 5pm wakhtiga maxaliga ah (3pm GMT).
Boqolaal qof ayaa lagu qasbay inay dibadda ku sugaan Gare du Nord saldhiga tareenka ee bartamaha Paris maanta ka dib markii ay booliisku amar ku bixiyeen in la baneeyo, iyadoo kooxda bambooyinka ay baarayeen wax la rumeysan yahay in ay ahaayeen shandad aan cidna la socon.
The Gare du Nord, si rasmi ah Paris-Nord, mid ka mid ah lixda saldhig ee tareenka weyn ee ku yaal Paris, ayaa laga daadgureeyay cabsi laga qabo bam, waxaana la joojiyay isu socodkii tareennada ee ka iman jiray terminalka.
Transport Express Regional (TER) ayaa barteeda twitter-ka ku soo qortay in gaadiidkii ka imaan jiray saldhigga la hakiyay, halka shirkadda maamusha Paris Metro ay sheegtay in tareennada aysan u socon labada dhinac ee u dhexeeya Paris Gare de Lyon iyo Paris Nord.
Kooxda metro ee Paris ayaa sheegtay in la filayo in isu socodku dib u bilowdo 5pm wakhtiga maxaliga ah (3pm GMT) waxa ayna xaqiijiyeen in shilkan uu la xiriiro shay boorso ah oo aan lala socon.
Saldhigga, mid ka mid ah ParisKa ugu weyn, wuxuu sidoo kale ka helaa tareenka Eurostar London wuxuuna u adeegaa garoonka diyaaradaha ee Charles de Gaulle.
Sawirro iyo muuqaal laga soo qaaday bannaanka saldhigga ayaa muujinaya dad aad u tiro badan oo ku sugaya waddooyinka xaafadda 10-aad ee Paris si ay wax walba u caddeeyaan. Qaar ka mid ah bartooda Twitter-ka ayaa xaqiijiyay in kooxda bambaanooyinka ay soo gaareen saldhigga.